Fiasa Vaovao: Lisitra Fanamarinana Taorian’ny Namoahana ny Lahatsoratra! · Global Voices teny Malagasy
Jereo sao misy olana ny lahatsoratra GV nataonao alohan'ny hivoahany !
Voadika ny 26 Marsa 2019 7:11 GMT
Ilay boaty kely vaovao fanamarinana fandefasana lahatsoratra vaovao, mametaka hadisoana ho an'ny faritry ny sary nofidiana, tamin'ny nakako ity pikantsary ity mba hisintonana azy ho toy ny sary nofidiana.🔄
Lahatsoratra matselaka ity mba hampidirana ny fiasa vaovao iray natsofoka tao amin'ireo tranonkala GV ampiasàna WordPress: Fanamarinana aorian'ny namoahana Lahatsoratra! Tsy haiko izy ity na hahafinaritra na hampientanentana, saingy mino aho fa mety ho ilaina izy io mba hiantohana hoe ananan'ireo lahatsoratra rehetra avoakantsika ireo ‘metadata’ rehetra manandanja ilainy.
Olana: Mora adino sady saro-tadiavina ireo pitsopitson-dahatsoratra
Saika niafara efa tafavoaka avokoa ny maro tamin'ireo lahatsoratra GV na toa mbola misy zavatra kely tsy ampy aza, toy ny famintinana, teny faneva na sary iray malaza, raha etsy andaniny ireo hafa manana olana mikasika ny ‘kirakira’, tahaka ny sary iray nofidiana lasa kely loatra na ampahany iray lava loatra.
Toy izay efa mety fantatrareo rahateo, lehibe loatra ny pejy famoahana WordPress, misy an'ireo efajoro kely marobe tsy maintsy arahana sy zavatra matetika very. Io no asa ataon'ireo mpanampy ny mpamoaka lahatsoratra, mamerina manamarina an'ireo zavatra rehetra ireo, saingy tena asa be izany!
Vahaolana: Lisitra Fanamarinana tonga dia eo ankilan'ny bokotra “Avoaka (Publish)”
Tsotra ity fomba fiasa vaovao ity: Lisitra iray amin'ireo ‘kirakira’ famoahana lahatsoratra ao anaty faritra Avoaka izay manamarina ho azy raha toa ilay lahatsoratra ka manana sata azo ekena ho avoaka na tsia. Raha misy ny olana, mahita ❌iray ianao (hadisoana) na ⚠️(fampitandremana) miaraka amina famaritana an'izay tokony ho tsaraina. Raha mety daholo ny rehetra, tsy misy afatsy ✅✅✅✅ no ho hitanao.
Tsindriho ny “Amboary (Edit)” mba hanovàna ny kirakira famoahana lahatsoratra tsy mila fikatsahana
Mitaky asa kely ity lahatsoratra ity mialohan'ny maha vonona azy ho avoaka.
Mbola tena ilaina, manana rohy Amboary ihany koa eo akaikiny eo ny andrana tsirairay izay azonao potsirina mba hahatongavana mivantana amin'io ‘kirakira’ io mba tsy hikarohana any an-kafa ireo faritry ny Fintina na ny Tagline!
Nandritra ny fotoana fohy izay nanandramako sy nampiasako an'ity fomba fiasa ity, nanome fotoana betsaka ho ahy ireny rohy Amboary ireny.
Andrana fanavaozana mibaiko tena mandritra ilay ianao miasa.
Ny dikan'izany dia hoe, isaky ny miasa ianao, ho voaova avokoa miaraka amin'ny vava ireo andrana, ho afaka hamaha ireo olana rehetra ihany koa ianao ary handrakitra izany indray mandeha monja!
Ireo andrana ankehitriny sy ho avy
Amin'izao fotoana izao, andrana efatra no miasa:
Halavan'ny lahatsoratra: Milaza aminao fotsiny izy io hoe firy no isan'ireo teny ao anaty lahatsoratra, tahaka ilay mpanisa teny kely mipetraka eo ambany faritra fanamboarana.
Sary voafantina: Amarinin'ity andrana ity hoe nametraka sary iray voafantina ve ianao teo amin'ny lahatsoratrao (tsy maintsy!) Ary manisy fanamarihana ho anao izy raha toa ka kely loatra ilay sary.
Fintina: Io no miantoka fa voapetrakao tsara ny andalana iray tamin'ny Fintina ho an'ilay lahatsoratra, ary mampitandrina ianao raha toa ka lava loatra ilay izy. Tapaka ho azy ireo fintina ireo raha toa ka lava loatra. Ilaina izany ny manaja tsara ny halavan'ireo fetra.
Tagline: Manamarina fa voapetrakao tsara ny Tagline ho an'ny lahatsoratra, ary mampitandrina anao raha toa ka lava loatra izany. Torolàlana iray fa tsy fitsipika ilay fetra atao amin'ny Tagline, ny Tagline manontolo dia tokony hampiseho koa raha toa ka lava noho ny fetra ilay izy.
Ao anatin'ny fotoana vitsivitsy, antenainay ny mbola hanampy andrana hafa:
Sokajy: Manamarina fa voapetrakao tsara ireo sokajy hafa noho ireo efa apetraka mialoha.
Famaritana toerana: Manamarina fa nanampy famaritana toerana iray ianao tao anatin'ny lahatsoratra (mitaky asa mismisy kokoa ity fomba fiasa ity!)
Halavan'ny URL (rohy): Fanarahamaso iray tsy dia ampiasaina loatra izay manamarina fa tsy dia lava loatra ny URL mba ho azo tazonina ao anatin'ireo angondraki-tsika
FANAOVAOZANA! Ankehitriny miaraka amin'ny Fanohanan'ny Lingua!
Toy izao no endrik'ilay mpankato ao anaty fandikàna fintina vaovao. Aza adino ny manamboatra ny Fintina sy ny Tagline!
Taorian'ny namoahana ity lahatsoratra ity, nahatsikaritra fanampiny iray tena manan-danja aho ary naparitako izany ankehitriny! Taloha, tao anatin'ireo dikan-dahatsoratra, noheverina ho OK ✅ fotsiny ireo andrana ho an'ny Fintina sy ny Tagline raha vao araikitrao ny vontoatin'ilay lahatsoratra kinendry, satria nisy Tagline sy Fintina tao anatin'ireo faritra. Saingy ho an'ny dikan-dahatsoratra kosa, tsy mety izay! Tsy maintsy mankao an'ireo faritra ireo ny mpandika ary mandika azy ireo, mba tsy hevitra diso no avoakan'ilay fanarahamaso ny famoahana.
Ny fanovàna andalam-panatanterahana dia namaha ity olana manaraka ity: manamarina izy io ankehitriny raha toa mitovy amin'ny an'ny lahatsoratra niaingàna ny vontoatiny ao amin'ireo faritra Tagline sy Fintina izay nadikanao. Noho izany, raha toa ilay mpandika tsy nanova ny vontoatiny tao anatin'ireo boaty kely, hahita hadisoana karazana toy izao izy ❌: Tagline tsy voadika.
Vantany vao ovànao ny lahatsoratra, heverin'ny rafitra fa voadikanao manontolo izany ary dia hilaza ireo hadisoana hoe somary lava na tsy ampy ny lahatsoratra.
Heveriko fa tena ilaina izy io ho an'ireo mpandika teny sy ireo tomponandraikitry ny asa fandikàna mba hanana tahiry momba ireny marik'ireo ‘kirakira’ amin'ny famoahana ireny!
Mino aho fa hanampy io!
Izay indray ny androany. Manantena aho fa hanamora kokoa ny asanareo eo amin'ny GV io. Azafady indrindra ampahafantaro ahy raha toa ianareo manana fanontaniana na mahita tsy fetezana ao anatin'ilay rafitra.
23 ora izayBorkina Faso